Xafiiska QM ee Somalia ayaa ku baaqay in la qabto kulamo aan rasmi aheyn oo dheeraad ah… – Hagaag.com
Xafiiska QM ee Somalia ayaa ku baaqay in la qabto kulamo aan rasmi aheyn oo dheeraad ah…
Xafiiska Qaramada Midoobey ee Somalia (UNSOM) ayaa war ka soo saaray fashilka hareeyay shirkii wadatashiga qaran ee maanta, ka dib markii aanay ka qaybgelin Madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland.
Shirkan ayaa waxaa Xerada Afisyooni ee Magaalada Muqdisho ka furay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ku wehlinayay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, iyadoona uu qorshuhu ahaa in looga hadlo arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Dhanka kale Danjiraha Ingiriiska ee Somalia, Kate Foster ayaa iyana ku baaqday in wadahadalada aan tooska ahayn ay sii socdaan, si looga gudbo caqabadaha hareeyay arrinta doorashada.
“Wadahadal dheeri ah waa inuu sii socdaa. Ka qaybgal buuxa iyo is afgarad buuxa oo ku saabsan hirgelinta qaabka doorashada ee 17-kii September. Waa wadada keliya ee horey loogu socon karo iyo tan ugu wanaagsan ee danta Somalia.” Ayay tiri Kate Foster oo warkan ku sheegtay qoraal ay dadka kula wadaagtay barteeda Twitter-ka.